Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha Polyester-ka hal funaanada ah |Huasheng
JilicsanIn yar oo fidsan.
Qoyaanka Wicking, Ka-hortagga bakteeriyada, qaboojinta, dib loo warshadeeyay
Dharkan shaadhka ah ee polyester-ka ah, maqaalkeena lambarkiisu yahay FTT-WB003, waxa lagu xidhay 100% polyester 200 diide.
Dharka shaadhka ah ayaa leh hal muuqaal oo dhinaca wejiga ah iyo mid ka duwan dhinaca dambe.Cidhifyadu way duubi doonaan ama rogi doonaan.Oo elongation in widthwise waa qiyaastii laba jeer ka badan dhererka.Astaamaha dharka Jersey si ay u noqdaan kuwo jilicsan oo raaxo leh jirka.
Funaanad keligiis ah ayaa inta badan loo isticmaalaa samaynta funaanadaha.Waxayna ku habboon tahay abuurista lebbis qulqulaya, dushooda qurxoon, lugaha jilicsan iwm.
Si loo daboolo heerarka tayada adag ee macaamiisha, dharka funaanadahaan waxaa soo saara mashiinadayada wareegyada casriga ah ee casriga ah.Mashiinka tolida ee xaalad wanaagsan ayaa xaqiijin doona tolid fiican iyo muuqaal cad.Shaqaalaheenna khibradda leh ayaa si wanaagsan u daryeeli doona dharkan funaanadaha min greige ilaa mid dhammeeyey.Wax soo saarka dhammaan dharka funaanadaha ayaa raaci doona habab adag si loo qanciyo macaamiisheena ixtiraamka leh.
Huasheng waxay qabataa fiilooyinka tayada sare leh si loo hubiyo waxqabadka iyo tayada dharka funaanadayadu inay dhaafaan heerarka warshadaha caalamiga ah.
Xakamaynta tayada adag si loo hubiyo in heerka isticmaalka dharka funaanada uu ka weyn yahay 95%.
Huasheng waxay soo saartaa taxane cusub oo dhar funaanad ah bishiiba.
Huasheng waxay rabta inay sii waddo abuurista qiimaha ugu sarreeya ee macaamiisha.Kaliya maahan inaynu macaamiisheena siino dhar funaanad ah, laakiin sidoo kale waxaan siinaa adeeg iyo xal aad u fiican.
Iyada oo leh 16 sano oo waayo-aragnimo ah dharka funaanadaha, Huasheng waxay si xirfad leh ugu adeegtay 40 waddan macaamiisha adduunka oo dhan.
Hore: Polyester spandex fidsan maro tolan
Xiga: 86 Polyamide ATY 14 Elastane Stretch Legging Fabrics
Dharka dharka ee Jersey
Dharka kaliya ee Jersey
Dharka suufka ah ee polyester-ka ah ee TC-tolid dhar ah oo loogu talagalay ...
Dib u warshadaynta RPET 95% polyester 5% spandex
Polyester-ku-xidhka dharka pique
100% Polyester pique maro tolan oo shaadhka polo ah
Polyester spandex 2 × 2 dhar feeraha ku duuban